Biyo xireenka Saddexda Gorges, kan ugu weyn adduunka! | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | tamarta Haydarooliga, Tamarta Korontada, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Biyo xireenka Saddexda Gorges (waa la fududeeyay Shiinaha: 三峡 大坝, Shiine dhaqameed: 三峽 大壩, pinyin: Sānxiá Dàbà) wuxuu ku yaalaa wabiga dhiniciisa Yangtze ee Shiinaha. Waa warshadda ugu weyn adduunka ee koronto laga dhaliyo.
Dhismaha biyo xireenka ayaa bilaabmay sanadkii 1983 waxaana lagu qiyaasay inuu qaadan doono ilaa 20 sano. Bishii Nofeembar 9, 2001 koorsadii webiga ayaa la furay iyo 2003 kooxdii ugu horeysay ee matoorro dhaliya ayaa bilaabay inay shaqeeyaan. Laga bilaabo 2004, wadar ahaan 2000 koox oo matoorro ayaa la rakibay sanadkiiba, ilaa shaqadu dhammaato.
1 Saddexda Gorges Dam,
1.2 Wabiga Yangtze
2 Isbedeladii Ugu Dambeeyay Ee Saddexda Goor
2.1 Hordhaca cunaha
Saddexda Gorges Dam,
Markay ahayd Juun 6, 2006, ayaa la burburiyey darbigii ugu dambeeyey ee haynta biyo xireenka, iyada oo ay ku filan yihiin waxyaabo qarxa oo lagu burburiyo 400 oo dhisme oo 10 dabaq ah. Waxaa la dhammaystiray Oktoobar 30, 2010. Ku dhowaad 2 milyan oo qof ayaa ahaa la raray inta badan xaafadaha cusub ee laga dhisay magaalada Chongqing.
Biyo xireenka wuxuu taagan yahay daanta magaalada Yichang, ee gobolka Hubei. Kaydka waxaa loogu magac daray Gorotkia, wuxuuna keydin karaa 39.300 bilyan m3. Waxeey heesataa 32 marawaxadood oo ah 700 MW midkiiba, 14 ayaa lagu rakibay dhanka woqooyi ee biyo xireenka, 12 dhanka koonfureed ee biyo xireenka iyo lix kale oo dhulka hoostiisa ah, oo wadartoodu tahay 24.000 MW.
Qorshayaashii asalka ahaa, biya xireenkan kaliya wuxuu lahaan lahaa awood uu ku bixiyo 10% baahida korantada ee Shiinaha. Si kastaba ha noqotee koritaanka baahida ayaa jibbaarmay, oo waxay awoodi doontaa oo kaliya inay bixiso tamarta 3% isticmaalka Shiinaha ee gudaha.
Shaqadan weyn waxay ka tagtay 19 magaalo iyo 322 magaalo oo ka hooseeya heerka biyaha, waxayna saameeyeen ku dhowaad 2 milyan oo qof waxayna quusiyeen qaar ka mid ah 630 km2 ee dhulka Shiinaha.
Biyo-xireenkan ayaa xakameyn doona kororka qulqulka webigan, oo ay sababeen xilli-roobaadka, sidaas awgeedna looga fogaanayo fatahaadda magaalooyinka deriska ah. Heerka biyuhu wuu kala duwanaan doonaa 50 m ilaa 175 m, waxay kuxirantahay xilliyada. Ujeeddada kale ee dhismihiisu waa in biyo la siiyo qaybo badan oo ka mid ah dadweynaha Shiinaha, oo leh awood kayd ah oo dhan 39.300 milyan oo mitir kuyuub, oo 22.150 milyan oo ka mid ah loo qoondeyn doono xakamaynta daadadka.
Ujeeddo kale ayaa ah in la sameeyo koronto, taas oo ay u yeelan doonto 26 matoorro marawaxadaha oo midkiiba yahay 700.000 oo kiilow.
Iyada oo la dhisayo biyo-xireenkan weyn, ayaa socodka wabiga dhanka wabiga Yangtze, taas oo kordhin doonta kobaca dhaqaalaha dalka. Laakiin iyada oo qayb ka ah horumarka iyo horumarka, deegaanka laga dhisi doono biyo xireenka Saddexda Gorges ayaa waxaa soo maray isbadalo waaweyn.
Mashruucani wuxuu fatahay in kabadan 250 km2 oo dhul ah, 13 magaalo iyo boqolaal tuulo yaryar webiga jiinkiisa. Barakaca horumarka awgeed ayaa ku qasbay in ka badan 1.130.000 qof inay ka baxaan guryahooda, taas oo ah tii ugu badneyd ee taariikhda laga saaro, sababo la xiriira dhismaha biyo xireen.
Kaliya inaan tusaale soo qaato, intii lagu jiray 2001 Spain waxay soo saartay awood koronto oo 18.060 MW ah. Biyo xireenka Saddexda Gorges wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro a awood sanadle ah oo ka mid ah 17.680 MW.
Saddexda Gorgor Yangtze Webiga ayaa ah qaybta ugu quruxda badan webiga Yangtze. Waxay sameeyaan taxane ah soo jiidashada dabiiciga ah iyo dhaqanka.
Isbedeladii Ugu Dambeeyay Ee Saddexda Goor
Qaybtan adduunku mar bay ahayd meel khatar ah. In kasta oo, tan iyo markii la dhisey biyo xireenka Saddexda Gorges (dhisme ahaan loo dhammeystirey 2006) heerka wabiga wuxuu u kordhay 180 m (590 ft) wabiguna wuxuu noqday mid badan deggenaan iyo in ka sii guuritaan badan. Maalin kasta daraasiin markab dalxiis ayaa u kala goosha Chongqing iyo Yichang. Safar raaxo leh, oo rakaabka siiya fursad ay ku arkaan quruxda qulqulka.
Saddexda Gorge waa Qutang Gorge, Wu Gorge, iyo Xiling Gorge. Qutang (/ chyoo-tung / 'Qu (magaca qoyska) balliga') Gogol wuxuu ka bilaabmaa caasimada degmada ee Fengjie, oo ku saabsan 500 Km dhanka hoose ee magaalada Chongqing, Magaalada Chonqing. Qutang waa qiyaastii 40 km oo dherer ah waxayna ku dhammaataa magaalada Wushan (/ Woo-shan / 'Mountain Witch') Magaalada Degmada.
Wu Gorge ("Witch") wuxuu bilaabaa Daning wuxuu ku biirayaa Wang Yangtze ee Wushan. Socdaalkii Webiga Daning ayaa dadka safarka ah ku sii maraya Yaryar Saddex Gorge, oo ah nooc kooban oo ka mid ah Saddexda Gorges, oo gogol xaar u ah ugu cidhiidhsan dooxooyinka, oo loo yaqaan Mini of the Seddex Gorge dhamaadka kale. Wu Gorge sidoo kale wuxuu ku dhow yahay 40 km oo wuxuu ku biirayaa Xiling Gorge oo ku yaal magaalada gobolka Badong (/ bar-dong / macno ahaan "Bariga Sihuan iyo Chongqing", runtiina wuxuu ku egyahay xadka Gobolka Hubei).
Xiling Gorge (/ sshee-ling / 'silsiladda galbeedka') qayb ka mid ah Badong, oo ku taal isugeynta Shennong Stream iyo Yangtze. Biyaha cadcad, marinnada la laalay iyo naxashyada sudhan ee Shennong Creek ayaa dalxiisayaasha u soo jiidaya marka laga reebo maraakiibta yar yar ee dalxiiska loo tago si ay dhinacyadan uga soo sahamiyaan soo jiidashada. Godka Sanyou (/ san-yo / 'saddex qof oo socdaal ah'), oo ku jira saddex gabyaa oo caan ah ayaa la sheegay inay sii joogeenWaa god qurux badan, "waa godka ugu fiican aagga Saddexda Gogol". Godka Sanyou wuxuu qiyaastii 10 kiiloomitir u jiraa Yichang oo ku taal Dooxada Xiling. Xiling Gorge wuxuu dhererkiisu yahay 100 km wuxuuna ku egyahay magaalada Yichang.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Biyo xireenka Saddexda Gorges, oo ah kan ugu weyn adduunka
Galab wanaagsan Saaxiibayaal. Sidee yihiin? Magacaygu waa Eduardo Hurtado waxaanan ahay Injineer Warshadaha. Muddo bilo ah ayaan ka shaqeynayey Horumarinta qaar ka mid ah Mashaariicda dhalinta Biyo-dhalinta. Kuwa xiiseynaya inay wax ka ogaadaan. Ii qor aniga waxaan kuu sheegayaa magaca mawduuca.
Jawaab Eduardo Hurtado